सरकारले ल्यायो १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१९ असार २०७७, शुक्रबार १०:०९ English
सरकारले ल्यायो १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहिबार १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड चालु खर्चमा र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बिनियोजन गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब बिनियोजन भएको छ । सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:३२ मा प्रकाशित